ကျန်းမာရေး Archives - Page2of 142 - BuzzFeed Myanmar
ဟိုက်ဝေး ကားမောင်းချိန်တွေမှာ လက်မောင်း နာကျင်ခြင်း မရှိအောင် သင် ဒါလေးတွေ သိထားဖို့လို ..!
တချို့က ကားမောင်းပြီး ခရီးသွားရတာ သက်သာတယ်၊ ဇိမ်ကျတယ် ထင်ကြတယ်ဗျ။ ဒါပေမယ့် ကား မောင်းရတာလည်း ထင်သလောက်တော့ မကောင်း၊ ဇိမ်မကျပါဘူး။အထူးသဖြင့် ကျနော်တို့ ပြည်တွင်းလို Used ကား စီးနင်းမှုများတဲ့နေရာတွေမှာပေါ့။ တဖက်နိုင်ငံမှာ အနည်းနဲ့အများ သုံး ပြီးသား၊ သဘောမကျလို့မှ ရောက်လာတဲ့ ကားတွေကို ကျနော်တို့ အများစု သုံးနေကြရတယ်လေ။
အင်ပြင်(အနီကွက်) ဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲ..? ပျောက်ကင်းရန်နည်းလမ်းများ
ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာ ခြင်ကိုက်ဖုလို သေးသေးလေးတွေကစပြီး ထူထူပိန်းပိန်း အနီရောင်ပြင်လိုက်ကြီးတွေ နေရာအနှံ့မှာ ပေါ်လာတာကို “အင်ပြင်” လို့ လူသိများပြီး ဆေးပညာအရ ““Urticaria” လို့လည်း ခေါ်ပါတယ်။အင်ပြင်ဟာ ကလေးလူကြီး အချိန်ခါမရွေး ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
အရက် ကို အားဖြည့်အချိုရည်နှင့် တွဲဖက်သောက်ခြင်း၏ ဆိုးကျိုးများ
ဂျာမန်ထုတ် Jagermeister အရက်ကို Red Bullကဲ့သို့ အားဖြည့်အချိုရည်များနှင့် တွဲဖက်ပေးထားသည့် Jager Bomb ယမကာ အခင်းအကျင်းသည် အနောက်နိုင်ငံများတွင် သိသိသာသာ ခေတ်စားလာသော် လည်း ယင်းသည် အန္တရာယ်ကို ဖိတ်ခေါ်မှု တစ်ခုဟု အမေရိကန် ပညာရှင်များက ပြောကြားခဲ့အားဖြည့်အ ချိုရည်နှင့်အရက် တွဲဖက်သောက်ခြင်းက ဆိုးကျိုးပိုများအရက်ကို အားဖြည့်အချိုရည်များနှင့် ရော၍ သောက် သုံးခြင်းသည် အရက်ချည်းသက်သက် သောက်ခြင်းထက် အန္တရာယ် ပိုကြီးမားကြောင်း သုတေသီများက သတိပေးလိုက်သည်။
လက်နဲ့မထိသင့်တဲ့ ခန္ဓာကိုယ်က နေရာ (၇)ခု
နားအတွင်းပိုင်းကို လက်ချောင်းလေးတွေနဲ့ ထိုးနှိုက်တာက နားစည်နဲ့ နားအတွင်းပိုင်းကနူးညံ့တဲ့အရေပြားကို ထိခိုက်ပျက်စီးစေပါတယ်။ နားထဲမှာ ယားယံတာ၊ နားကိုက်တာမျိုးဆိုရင် သက်ဆိုင်ရာဆရာဝန်နဲ့ ပြသတာကသာလျှင် အကောင်းဆုံးပါပဲ။
ပြည်ကြီးငါး (ကင်းမွန်)ဟင်းစားသူများ သိထားရပါမယ်
၀ယ်စားမိမှာစိုးလို့ပါ.. သေတတ်တယ်တဲ့… ပိုးဟပ်လဲ မြန်မာလို ဘာခေါ်ရမလဲ မသိပါဘူး…ဘဝဲပဲ ထားပါတော့… ရနောင်းပင်လယ်နှင့် ငါးလုပ်ငန်း ဆိုင်ရာဌာနသို့ ဈေးထဲတွင် ရောင်းနေသော အူထုတ်ပြီးသား (ဘဝဲ)အား ချက်စားရန် ဝယ်လာကြောင်း.. သို့သော် သတိထားမိသည်မှာ ထိုဘဝဲသည် အဆိပ်ရှိသော ဘဝဲနှင့်တူနေကြောင်း သတင်း ပို့တိုင်ကြားလာခြင်းကြောင့်….
ဆောင့်ကြောင့်ထိုင် အနေအထားနဲ့ အိမ်သာ တက်ခြင်းဟာ အမှန်ကန်ဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်
လူသားတွေ မစင်စွန့်တဲ့ အကြောင်းအရာဟာ မပြောသင့်မပြောအပ် တဲ့ အကြောင်းအရာ တစ်ခုဖြစ်ပေမယ့်လည်း သိပ္ပံ ပညာရှင်တစ်ယောက်က မစင်စွန့်တဲ့ နည်းလမ်းအကြောင်း ပြောပြီး အောင်မြင်မှု ရပြီးတဲ့နောက် လူတိုင်းအတွက်လည်း ပြောစရာ တစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါပြီ။
အမျိုးသားတိုင်းဟာ လိင်တံကြီးစေတဲ့ Pump စက်တွေ၊ ဆေးတွေ၊ လေ့ကျင့်ခန်းတွေ၊ ခွဲစိတ်မှုတွေ အားလုံးကို သိကြမှာပါ။ ဒါပေမဲ့ ဒီနည်းလမ်းတွေ အားလုံးက တကယ် အလုပ်ဖြစ်ရဲ့လားဆိုတာရော သေချာသိကြပါသလား။ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရရင် အမျိုးသားတိုင်း သူတို့လိင်တံကို ပိုကြီးစေချင်ကြပါတယ်။
လက်သည်းပေါ်က အဖြူရောင် အစက်အပျောက် ကနေ ဖော်ပြနေတဲ့ ကျန်းမာရေး ချို့ယွင်းမှု
လက်သည်းပွင့်တယ်လို့ အခေါ်များတဲ့ လက်သည်းပေါ်မှာ အဖြူရောင် အစက်အပျောက်လေးတွေ ပေါ်ခြင်းကို အများစုကတော့ စန်းပွင့်တယ်လို့ ယူဆတတ်ကြပါတယ်။ တကယ်တော့ ဒါဟာ သင့်ရဲ့ စားသောက်နေထိုင်မှု ပုံစံမှာ ခန္ဓာကိုယ်အတွက် လိုအပ်တဲ့ ဓာတ်တခုခု လိုအပ်နေတာကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် လက်သည်းပွင့်ခြင်းက ဘယ်လိုမျိုး ကျန်းမာရေးအခြေအနေကို ညွှန်ပြနေတယ်ဆိုတာကို ဗဟုသုတအနေနဲ့ ဖော်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်။